Ny tantaran'ny hafatra an-tsoratra | Martech Zone
Ny tantaran'ny fandefasana hafatra an-tsoratra
Zoma, Desambra 2, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
19 taona izay no lasa hafatra an-tsoratra voalohany nalefa? Ny hafatra an-tsoratra voalohany dia nalefa tamin'ny 03 Desambra 1992 tamin'i Richard Jarvis avy amin'i Neil Papworth, izay nandefa ny hafatra tamin'ny alàlan'ny solosainy manokana. Novakiana ny hafatra an-tsoratra tratry ny krismasy. Ity ambany ity ny fandaharam-potoana noforonin'i Tatango hanampiana ny mpamakinao hahatakatra ny fivoaran'ny fandefasan-kafatra nandritry ny 19 taona lasa. Ny fandefasana hafatra an-tsoratra fotsiny izao dia indostria $ 565 miliara ary, ankoatry ny feo, ny fitaovana mahazatra indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fitaovana finday iraisampirenena.
Loharano: Marketing amin'ny Tatango SMS
Tags: SMSfandefasana hafatra an-tsoratra
Dec 2, 2011 ao amin'ny 2: PM PM
tena milay io!
Dec 3, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Fampahalalana vaovao, tena mahaliana tokoa ny mahita azy
ny fomba nanombohana sy nivoaran'ny fandefasan-kafatra an-tsoratra nandritra ny taona maro, misaotra.
Dec 5, 2011 ao amin'ny 5: PM PM
Tsy mino aho fa vao 10 taona monja no tena nandefasanay hafatra nefa mbola tsy fantatray hoe nanao ahoana ny fiainantsika raha tsy teo izy! Ha
Mikaroha MLS Indianapolis maimaim-poana!